चीनका केही पौराणिक कथाहरुमा धेरैजसो बहादुरका बारेमा चर्चा गरिएको छ।
प्राचीनकालमा मानिसलाई आगो के हो? यसको प्रयोग कसरी गर्ने? भन्ने बारेमा केही पनि थाहा थिएन। जंगलमा जनावरहरु कराएको सुनेर उनिहरुलाई डर लाग्थ्यो। मानिसहरु काँचो अथवा नपकाएको खाने कुरा खाएर सधैं बिरामी हुन्थे। र यसैका कारण उनिहरुको जीवन छोटो थियो।
त्यस्तो अवस्था देखेर फु यी नामका एकजना देवतालाई निकै दु:ख लाग्यो। उनले मानिसलाई आगो दिलाउने विचार गरे। उनले ठूलो गर्जनका साथ विजुली उत्पन्न गराउने बादलबाट पानी पार्न लगाए। चठ्याङ्ग र विजुलीका कारण पनि मानिसहरु भयभित भएर यत्रतत्र भाग्नथाले। तथापि तिनीहरुले त्यति बेला एउटा कुरामा ध्यान पुर्‍याएका थिए। त्यो कुरा के थियो त भन्दा, जनावरहरु आगो देखेर भागेका थिए। त्यति बेला एकजना जवान मानिस आगोको छेउमा पुग्दा न्यानो अनुभव गर्‍यो। आगोले पोलिएर मरेको जनावरहरुको मासु उनिहरुलाई खुब मीठो लाग्यो। त्यसपछि यनिहरुले पालै-पालो आगो नजिक बसेर त्यसको सुरक्षा गर्नथाले। तर कुनै एक दिन पालो बसिरहेका एकजना सुतेका कारण रुखको हाँगो बलेर सिद्धिएपछि आगो निभ्यो। मानिसहरु पुन: अँध्यारोमा बस्न वाध्य भए।
देवता फु यीले आगोको फाइदा बारेमा जानकारी हासिल गर्न सफल भएका तिनै जवानलाई राति सपनामा भने: तिमी बसेको स्थानदेखि धेरै टाढा पर्ने श्वै मिन नामक मुलुकमा आगो छ। तिमी त्यहाँ जाउ र आगो ल्याएर आउ।
त्यो जवान धेरै दु:ख-कष्ट झेल्दै अन्त्यमा श्वै मिन पुग्यो। तर त्यहाँ कतै आगो देखेन। त्यहाँ त दिन र रात पनि छुट्याउन सकिंदैनथ्यो। उ निराशा भएर एउटा "श्वै मु" नामको रुखमुनि बसेर आराम गरिरहेको बेला उसका आँखा अगाडि उज्यालो देखियो। उसले "श्वै मु" नामको त्यस रुखमा एउटा ठूलो चराले आफ्नो कडा चुच्चाले रुखमा भएका किरा खाइरहेको देख्यो। उसले त्यस चराको चुच्चो रुखमा ठोक्किँदा आगाका झिल्का आएको पनि देख्यो। उसले तुरुन्तै "श्वै मु" नामक त्यस रुखका केही हाँगा लियो र एउटा हाँगाले अर्को हाँगामा रगडेपछि धुवाँ निस्क्यो र आगो पनि निस्क्यो।
त्यसपछि त्यो जवान आफ्नो जन्मथलोमा आगो लिएर फर्क्यो। अब मानिसहरुले जाडो र डरका बीच बाँचिरहनु परेन। त्यहाँका मानिसहरुले त्यस जवानलाई नायक बनाए र उसलाई "श्वै रन" भन्नथाले। "श्वै रन्"को अर्थ आगो ल्याउने मानिस हो।